Wasiirka Caafimaadka Puntland oo eedeyn u soo jeediyey Dr.Cabdiweli Gaas
Garoowe:-Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland Dr.Cali Warsame Cali ayaa eedeyn kulul u jeediyay R/W -hore ee DFS Prof.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Wasiirka ayaa ku eedeeyey Gaas in uusan waxba u qaban Puntland xiligii uu ahaa Ra’iisul wasaaraha DFS.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland Dr.Cali Warsame Cali ayaa sheegey in Dawladda Somalia ee uu xilka ugu sareeya uu ka hayey Cabdiweli Gaas aysan ka soo gaarin wax kaalmo caafimaad ah isaga oo xusay in dhaqaalo badan iyo kaalmo caafimaad ay heli jirtay dowlada Federaalka Ee Soomaaliya , hase ahaatee, aan Puntland la siin wax tixgalin ah.
Wasiirka Caafimaadka ee Puntland ayaa waxaa kale oo uu xusay in Wasiir kuxigeenka Wasaarada Caafimaadka Puntland uu tagay magaalada Muqdisho si kaalmada caafimaad ay xaqa u leedahay Puntland uu u soo qaado balse ay dowladii R/W Gaas xitaa gaabili weysay .
Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr.Cali Warsame Cali ayaa wuxuu sheegay in horumarka iyo mashaariicda caafimaad oo ay wasaaradiisa ka hergalisay Puntland aysan wax taageero ah ka geysan xukuumadii R/W Cabdiweli Gaas balse ay ka heshay Beesha Caalamka iyo hay,daha deeqada bixiya.
Dr.Cali Warsame Cali Wasiirka Caafimaadka Puntland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay eedeynta uu R/W- hore ee DFS Cabdi weli Maxamed Cali Gaas uu u soo jeediyey Puntland wuxuuna yiri ha la weydiiyo dowladii Cabdiweli lacagtii ay dowlada Spain ugu deeqaday Isbitaalka magaalada Gaalkacyo oo gaareysay aduun dhan $405,000 doolar xagee bay martay waxay dhacaday xukuumadiisa iyada oo lacagtaas na soo gaarin.
Wasiirka Caafimaadka ee Puntland ayaa sheegay in xukuumadii R/W Cabdi weli ay heshay fursado badan oo ay ka mid ahaayeen qalab farabadan oo caafimaad in caalamka laga helay,Tababaro caafimaad oo laga helay Turkiga iyo xitaa dib u habeyn dhismayaasha Isbitaalada ka jira Soomaaliya oo aysan Puntland helin.
Raisulwasaarihii Hore ee Cabdi weli Gaas ayaa isbuucii la soo dhaafay ku eedeeyey dowlada Puntland in ay caburisay shacabkeeda waxna aysan ka qaban adeegyada kala duwan sida caafimaada,wadooyinka ,iyo arimo kale oo badan wuxuuna baaq u diray Isimada Puntland kuwaas oo ah ubaddhexaadka ay ku taagan tahay Puntland.
256,858 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress